🥇 ▷ Vivo NEX 3 5G: astaamaha, faahfaahinta iyo qiimaha ✅
Vivo NEX 3 5G: astaamaha, faahfaahinta iyo qiimaha
Dhawr jiilal casri ah oo taleefanno gacmeedyo ah kaas oo loolanka loogu talagalay shaashadda oo dhan la dedejiyey, Thanks to feejignaan ka dibna u gudbiya cutubyada kaamirada laga saari karo si loo hubiyo in shaashadda oo dhan, Vivo Ku celcelinta ay isku dayaan in ay ku qaadaan shaashadda-ilaa-hore boqolkiiba hal talaabo dheeraad ah.
Isaga ayuu ku sameeyaa Vivo NEX 3, a casriga aaladaha ugu sarreeya ee qalabka yimaadda, marka loo eego tirooyinka astaanta shirkaddu lafteeda ilaa boqolkiiba 99.6% ee shaashadda – taas oo ay u badan tahay inay jirto khiyaamo haddii aad xisaabta ku dareyso shaashadda dhinaca -, taas oo dhererkeeda wax aan ka yarayn 6,9 inji dhexroor ahaan.
Vivo NEX 3 5G, ku laabashada shaashadda oo dhan
The Vivo NEX 3 illoobo shaashadda labaad si aad uga tagto feejignaan waxaan ku aragnay NEX Dual Display oo hadda la soo bandhigay 9 bilood ka hor. Waxay sidaas u sameyneysaa iyada oo dib loo soo celinayo ‘shaashadda biyo-mareenka’ ee caanka ah, kaas oo geesaha ka jaraya xagal aad u sareeya oo hubiya in xitaa geesaha aan laga arki karin wejigooda hore.
Shaashad sidan oo kale ah ayaa laga filayaa Huawei Mate 30 Pro, oo la filayo in la soo bandhigo toddobaadkan, sidaa darteed waxay noqon kartaa hindisaha soo-saareyaasha soo socda si ay u kala saaraan moodooyinkooda. Vivo wuxuu ku daraa ‘Touch Sense’, oo ah nidaam wax ku ool ah oo lagu xakameeyo oo lagu kala saaro jimicsiga aan ku sameyno farahayaga iyadoo la tixgelinayo inta kale ee taabashada ficillada aan ku sameyn karno calaacasha gacanta, kaasoo sidoo kale xasaasi u ah cadaadiska saaran. dhinacyada, kaas oo kuu oggolaanaya inaad si buuxda u ilooto badhamada dhinaca.
Imtixaankii warbaahinta Shiinaha, vivo NEX 3 si lama filaan ah uma taaban, waxaa ka wanaagsan taleefanka Samsung ee khafiifka ah. pic.twitter.com/ym5luhVDjE
– Cirka barafka (@UniverseIce) Sebtember 16, 2019
Shaashaddan cajiibka ah waxay leedahay tikniyoolajiyadda OLED, in kasta oo ay wali ku jirto go’aan aan laga yaabo inuu u sarreeyo. FullHD + ama 1080p elongated for guddi aad ugu dhow 7 inji Waxay u badan tahay inay bilaabi doonto inay muujiso, sida Xiaomi Mi A3 horeyba u sameysay, cilladyada astaamaha ee matrix PenTile oo ay u badan tahay inuu ku daro.
Dhinacyada xasaasiga ah ee cadaadiska waxay u oggolaadaan Vivo inay iloobaan badhamada dhinaca ‘Nex 3’
NEX 3 5G wuxuu la yimid processor-ka ugu fiican ee soosaarayaashu hadda iibsan karaan, oo ah “Snapdragon 855+”. Waxay u muuqataa inay tahay nooc waxoogaa ah oo la dedejiyay oo ku saabsan moodalka tixraaca kaas oo ku guuleysta waxqabadka wanaagsan dhinacyada qaarkood sida ciyaaraha.
Waxaa jiri doona laba nooc oo terminal ah marka loo eego xaddiga xusuusteeda. Waxay ka bilaabmi doontaa 8 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah xusuusta gudaha ah, oo kacday illaa 12 GB iyo 256 GB siday u kala horreeyaan nooca ugu hamiga badan. Labada xaaladoodba, waxay lahaan doontaa heerka ugu dambeeya ee Kaydinta UFS 3.0, waxaa laga heli karaa oo keliya Galaxy Note 10, OnePlus 7 Pro ama Galaxy Fold.
Isbeddellada kale ee weli loo soo bandhigo Mate 30 Pro ayaa ah wareega kamarad wareega, inkasta oo uu ugu mahadnaqay haddana mar hore ayuu adeegsaday nidaam kan la mid ah kii ugu dambeeyay. Waxaan ku aragnaa mid ka mid 64 kamaradood ee ugu horreeya MP, ahaanshaha mid ka mid ah meelihii ugu horreeyay ee ay yeeshaan dareemahan, furitaanka f / 1.8. Telefishan iyo xagal ballaadhan ayaa lagu daray si loo dhammaystiro aragtiyaha kala duwan, labadaba 13 MP.
Waxaan sidoo kale aragnaa kamarad hore looga saari karo, oo ku sii jira 16 MP taas oo ay ugu wacan tahay boosaska hoos u dhacay ee nidaamyada noocan ah. Waa qeyb xoogaa ballaadhan ka ballaaran kan aan ku aragnay kuwa kale sida Mi 9T ama OnePlus 7 Pro.
Terminalka garoonka ayaa leh Isku xirnaanta 5G Thanks to Qalabka ‘Snapdragon X50’ ee aan ku aragno inta badan Terminalka noocan ah, ee ku xigta a weyn oo ah 4,500 mAh batari in la daryeelo isticmaalka tamartaas dheeriga ah ee 5G ay weli macnaheedu tahay. Si loo magdhabo, waxay ku timaadaa nidaam lacag qaadasho oo deg deg ah oo gaaraya illaa 44 W.
shaashadda 6.9 “OLED, FullHD + (1080p)
Cabbirka 76 x 167 mm
Adag 9.4 mm
Miisaan 219 garaam
Xusuusta 128, 256 GB UFS 3.0
Qolka ugu weyn 64 MP f / 1.8, zoom 13 MP f / 2.5 iyo xagal ballaadhan 13 MP f / 2.2
Kaameerada hore 16 MP f / 2.1, soo bax
Durbaan 4,500 mAh, 44W dhakhso
Iska caabin –
Noocyada cilmiga noolaha Qalabka sawirka faraha ayaa muujinaya muuqaalka, indhaha
Isku xirnaanta 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, jaak, GPS, Galileo, Glonass, Beidou
Nidaam Android 9 Pie
Furitanka Sebtember 2019
Qiimaha rasmiga ah Qiyaastii 730 euro
Vivo NEX 3 5G, helitaanka iyo qiimaha
Vivo NEX 3 5G ayaa waqtigan lagu soo bandhigay dhacdo ka dhacda suuqa Aasiya, in kasta oo qiimaheeda bilowgeedu is beddelayo una dhiganta ilaa 730 euro. Waxaa intaa dheer noocaan, waxaa jira NEX 3 oo aasaasi ah oo leh isku xir 4G ah.